बच्चाहरुको अण्डकोष सुन्निएको नि:शुल्क उपचार, तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्
बच्चाहरुको अण्डकोष सुन्निएको नि:शुल्क उपचार
डिसेम्बर 14, 2018 डिसेम्बर 14, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment अण्डकोष, उपचार, डा. राम बहादुर बोहरा, बच्चा
बच्चाहरुको अण्डकोष सुन्निएको नि:शुल्क उपचार ! स-साना बच्चाहरुमा आज यो समस्या अत्यधिक देखिएको छ । हामीले विगत लामो समयदेखि यो रोगको उपचार गर्दै आएका छौं । कुनै पनि बच्चामा यस्तो समस्या देखिएमा डराउनुपर्दैन हामीलाई प्राकृतिकले यस्तो जडिबुटी दिएको छ जसलाई हामी बुटिको रूपमा बान्दछौं । यो रोग केहि महिनामा हराएर जान्छ ।
तर बाधेको बुटि हराएमा पुन: हुने हुनाले दोहराउनुपर्ने देखिन्छ । हामीले यस्ता जडिबुटी चमत्कार गर्दै आएका छौं । यो जडिबुटी हामीले अरूलाई पनि चिनाएका थियौं तर उहाँहरू सफल हुन सक्नु भएन यो ईश्वर भगवानको लिला अपरम्पार छ । मेरो जिजुबुबा हजुरबुबा र बुबाले गर्दै आएको परम्परा धान्न मैले पनि यो सेवा लामो समयदेखि नि:शुल्क दिदै आएको छु । यो सेवा लिन ९.३० भित्र आइसक्नु र्ने हुन्छ । विशेष जानकारी चाहिएमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ ।
यो उपचार हाम्रो जिजु बुबालाई सपनामा जोगीले दिएको भन्ने कुरा हाम्रो बुबाले भन्नुभएको थियो आज मेरो बुबा हुनुहुन्न तर मैले यो सेवा नि:शुल्क गरी रहेको छु । जडिबुटीको समय हुन्छ जस्तै बाल्यकाल, युवा अवस्था र बृद्ध अवस्था हामीले जडिबुटी यदि बृद्ध अवस्थाको ल्याउछौं वा बाला अवस्थाको ल्याउछौं भने पनि औषधिले काम गर्दैन । पुर्ण युवा अवस्थाको प्रयोग गर्छौं भने पक्कै निको हुन्छ ।
अर्को रोचक प्रसङ्ग जडिबुटीबारे भन्न मनलाग्यो बुटि बाधेको केहि दिनमा महिनावारी भएको बाहिरको महिलाले छुन्छिन भने यो बुटि गायब हुन्छ । यदि यो बुटि हराएमा पुन बाध्नुपर्ने हुन्छ । हराएको बुटि प्राय: भेटिएको जानकारी हामीलाई छैन । मैले जनकल्याणको लागि यो बुटि बाद्ने गर्दछु ।
मैले नि:शुल्क उपचारबारे प्रचार गर्न खोज्दा २८ दिन फेसबुकबाट बाहिर रहनु परेको थियो । आज पाठकको हितमा यो बुटिबारे जानकारी पस्कन लागेको छु । यो उपचार अति नै चमत्कारयुक्त भएकाले आफ्नो छरछिमेकमा यदि बच्चामा देख्नु भएमा सहयोग गरी पुन्य कमाउन सक्नुहुन्छ । सक्दो सेयर गरेर नपुगेका साथीहरूलाई जानकारी दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।
औषधीको रुपमा मरिचको प्रयोग
औषधीको रुपमा कागतीको प्रयोग
औषधीको रुपमा अदुवाको प्रयोग
डा. राम बहादुर बोहराद्वारा जनहितमा जारी सूचना ! थप जानकारीको लागि तलको सुचनामा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
← मुटु रोगको प्राकृतिक उपचार
सनातन धर्म संस्कृतिको अवमुल्यन गर्नेले एकपटक सोच्ने कि ? →
जामुन खानुका फाइदाहरु
अप्रील 30, 2019 अप्रील 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
आँखाको रोग मोतियाबिन्दु र यसको उपचार
नोभेम्बर 4, 2018 नोभेम्बर 4, 2018 साइन्स इन्फोटेक 6
पाठेघरको मुखको क्यान्सर र यसको उपचार
सेप्टेम्बर 27, 2018 सेप्टेम्बर 27, 2018 साइन्स इन्फोटेक 5
One thought on “बच्चाहरुको अण्डकोष सुन्निएको नि:शुल्क उपचार”
Pingback:गर्भमा रहेको बच्चा राम्रो विचारको होस् भन्ने चाहना भए यसो गरौं
स्वास्थ्यको लागि कर्कलो खानुका फाइदाहरु
मुख बाङ्गिने रोगको प्राकृतिक उपचार
माया के हो ?
स्वास्थ्यको लागि वियर पिउनुका फाइदाहरु र वेफाइदाहरु